ကွတ်ကီးပေါ်လစီ - Sorrento Therapeutics
ကွတ်ကီးသည် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ သင့်ဘရောက်ဆာထံ ပေးပို့သည့် စာတိုလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိ စာမျက်နှာများကြားတွင် သွားလာနေစဉ် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ပေးထားသည့် အချက်အလက်အချို့ကို မှတ်မိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အရာပေါ်မူတည်၍ ကွက်ကီးတစ်ခုစီသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်။ ကွတ်ကီးများသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် သင့်အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အသုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ သင့်လက်ပ်တော့ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်း) ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဆိုက်၏အတွေ့အကြုံကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့် cookies များကိုသုံးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စာမျက်နှာများကြားတွင် ထိရောက်စွာသွားလာနိုင်စေရန်၊ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကို မှတ်မိစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများစွာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမပါတီနှင့် တတိယပါတီကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုလည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက် အချို့သော cookies များ လိုအပ်ပါသည်။ အခြား cookies များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုခြေရာခံပြီးပစ်မှတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နေသောတတိယပါတီများကိုလုပ်ဆောင်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံသို့ ပေးပို့နိုင် သို့မဟုတ် ပြသနိုင်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ကွက်ကီးများကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နေချိန်တွင် သင့်အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အခြားနည်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ကြော်ငြာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကွတ်ကီးများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤသည်ကို အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့် cookies ကိုအသုံးပြုသနည်း။
ဤ cookies များသည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်ကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် လုံခြုံသောနေရာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏အင်္ဂါရပ်အချို့ကို အသုံးပြုရန် တင်းကြပ်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ ဤကွတ်ကီးများသည် ဆိုက်ကို ပို့ဆောင်ရန် တင်းကြပ်စွာ လိုအပ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Site လုပ်ဆောင်ချက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ၎င်းတို့ကို သင်ငြင်းဆန်၍ မရပါ။ သင့်ဘရောက်ဆာဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များကို ပိတ်ဆို့နိုင် သို့မဟုတ် ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies နမူနာများတွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်-
Adobe က Typekit
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှု၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေး
ဤ cookies များသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သို့ဝင်ရောက်အသုံးပြုထားကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးသည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခြေရာခံနိုင်ရန်နှင့် ဆိုက်ကို လုံခြုံစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကဲ့သို့ သုံးစွဲသူများနှင့် Site စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းအမြင်များရရှိရန် သို့မဟုတ် သင်၏အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Site နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးကွက်ကီးများ၏ နမူနာများတွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်-
နှိပ်ခြင်းဖြင့် Google Analytics cookies များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် Google သည် သင့်ဒေတာကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒီမှာ. Google Analytics မှထွက်ရန် သင်သည် Google Analytics Opt-out Browser Add-on ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဒီမှာ.
ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ကြော်ငြာကွက်ကီးများ
ဤကွက်ကီးများကို ကြော်ငြာမက်ဆေ့ချ်များကို သင်နှင့် သင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှပေးပို့သော cookies များကိုအသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤ cookies များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို ဘယ်ဘရောက်ဆာများလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်ကို မှတ်သားထားပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများ၏ထိရောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ကြော်ငြာကွက်ကီးများ၏ နမူနာများတွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်-
ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Google ကွတ်ကီးများကို မည်သို့အသုံးပြုပုံနှင့် ဖယ်ရှားရန် ညွှန်ကြားချက်များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ. ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ပြီး “ဖယ်ထုတ်ရန်” ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Adobe Experience Cloud ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများမှ ဖယ်ထုတ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ကွတ်ကီးများကို ကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း။
ဘရောက်ဆာအများစုသည် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်များမှ ကွတ်ကီးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့်/သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းကို ရပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သင့်ဘရောက်ဆာရဲ့ ဆက်တင်တွေမှာ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပါ။ သင့်ဆက်တင်များကို မပြောင်းမချင်း ဘရောက်ဆာများစွာသည် ကွတ်ကီးများကို မူရင်းအတိုင်း လက်ခံပါသည်။ ကွတ်ကီးများကို လက်မခံပါက၊ သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကို အသုံးမပြုနိုင်သည့်အပြင် ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်ပေ။ သင့်ဘရောက်ဆာတွင် မည်သည့်ကွတ်ကီးများကို သတ်မှတ်ထားကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့် ဖျက်နည်းတို့အပါအဝင် ကွက်ကီးများအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.allaboutcookies.org.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ စိတ်ပါဝင်စားမှုအခြေခံ ကြော်ငြာခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းအတွက် နောက်ထပ် ညွှန်ကြားချက်များ အပါအဝင် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ သင့်ရွေးချယ်မှုများအကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များသို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါ privacy@sorrentotherapeutics.com.
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည်- ဇွန်လ 14 ရက်၊ 2021